Diyaarad Siday Qeybtii Labaad Soomaali Ka Cararay Colaadda Koonfurta Sudan Oo Ka Degtay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Diyaarad sida ilaa 136 Soomaali ah oo laga soo qaaday magaalada Juba ee caasimadda Koonfurta Sudan ayaa soo caga dhigatay garoonka diyaaadaha Aadan Cadde ee magaalada Mqudisho.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kireysay diyaarad gaar ah, waxeyna saaka ka baxday Muqdisho, iyadoo wax yar ka hor salaadda maqrib kazoo degtay garonka Mqudisho, kadib markii ay Juba kazoo qaaday Soomaali ka baxsanaya coladda dalka Koonfurta Sudan.
Muwaadiniinta ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka kala tirsan Wasaaradaha Arrimaha dibedda, Arrimaha gudaha, ciidamada ammaanka iyo xubno ka tirsan Maamulka gobolka Banaadir.
Qaar ka mid ah muwaadiniintaasi ay dowladda gurmadka u fidisay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay aad ugu faraxsanyihiin sida ay dowladdu uga jawaabtay codsiyadooda ahaa in dalkaasi laga soo daabulo, maadaama dalka South Sudan uu ka soconaya dagaalo labo dhinac ah oo u dhexeeya Madaxweynaha dalkaasi Silva kiir iyo Kuxigeenkiisii hore ee Riek Machar.
Dadka galabta dowladda Soomaaliya ka keentay Koonfurta Sudan ayaa noqonaya qeybtii labaad ee laga soo daad gureeyo halkaas, tan iyo markii 15-kii bishii hore ee December uu dalkaas ka qarxay dagaal sokeeye oo keenay in xitaa ajaanibta la dilo lana dhaco.
Duulimaadkii ka ka horeeyeey ee Soomaalida looga soo qaaday Koonfurta Sudan ayaa dhacay 30-kii bishii hore ee December 2013, waxaana xilligaas diyaaradi Muqdisho keentay 131 muwaadin oo ka mid ahaa dadkii ku go’doomay goobaha colaada ee wadanka South Sudan.